Home / Interior design / Inona no atao hoe loko malay?
2021 / 08 / 04 FisokajianaInterior design 6106 0
Ny loko malay, fantatra koa amin'ny hoe Venetian stucco, dia loko kanto avy any ivelany, ary malama sy voajanahary ny tampony, toy ny fikasihana sy ny vokany toy ny marbra, miaraka amin'ny soritra voasokitra voajanahary. Ny vokatr'ilay lamina dia telo-refy, ary matetika ampiasaina amin'ny endrika an-trano sy ampahibemaso. Androany isika dia hiresaka momba ny inona ny loko malay amin'ireo lafiny dimy manaraka.
01.Inona no atao lacquer Malay?
02. Toetra mampiavaka ny loko malay
03.Ny fampiasana loko malay
04. Dingana sy fitandremana fanarenana
05.Ny vidiny sy ny lokon'ny loko malay
Ny loko malay dia vokatra azo avy any ivelany, ny anarana anglisy dia stucco, midika hoe rihitra. Rehefa nampahafantarina an'i Shina izy dia nantsoina hoe "loko malay" satria ny endriny dia mitovy amin'ny dian-tanan'ny soavaly mihazakazaka.
▲ Fang Lei, endrika trano tokana
Ny loko malay dia karazana loko maloto mifangaro amin'ny tanimanga mibontsina sy emulsion akrilika. Izy io dia karazana loko izay mamokatra firaketana isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanesorana amin'ny rindrina amin'ny fitaovana fanosehana isan-karazany.
Ny vita vita amin'ny loko malay dia misy vokany manjelanjelatra, ary malama ny lokon'ny loko ary be pitsiny ny lamina. Raha miafina dia misy heviny telo-refy. Amin'ny ankapobeny, ny loko malay dia matetika ampiasaina ao afovoan-tany: loko malay tokana, loko malay mifangaro, loko volamena sy volafotsy, loko malay, loko malay phantom.
▲ Loko volamena sy volafotsy volon-doko malay
Endri-javatra amin'ny loko Malay
Ny lacquer malay dia somary mora ny miasa, ary ny fikororohana sy ny famaohana ary ny famolahana ihany no ilaina. Ny firafitry ny endriny sy ny endriny dia misy ifandraisany amin'ny fomba fanamboarana.
Vokany tsara tarehy
Ny fomba fanamboarana tsy manam-paharoa dia manome ny zava-kanto manokana ny loko Malay. Ny fomba haingo dia manavao ary mazava ny endriny. Tena tiana izy io noho ny mampiavaka azy ny voam-bary.
▲ Ny loko malay dia manan-karena be amin'ny loko sy ny endriny
Tsy tantera-drano sy fanoherana ny harafesina
Ny loko malay dia manana ny mampiavaka ny fanoherana ny tasy, ny fanoherana ny rano, ny malama ary ny faharetana. ny loko malay dia misy fanoherana rano mahery vaika sy fanoherana ny harafesina izay mety hahatonga ny rindrina ho tsara toy ny vaovao mandritra ny folo taona!
Ny fanoherana ny tasy sy ny abrasion
Ny loko malay dia manana anton-akanjo ambony kokoa ary matanjaka noho ny loko hafa. Ny dingan'ny pika manify amin'ny tampon-tany koa dia manamora ny fanangonana vovoka ary mora diovina.
Fampiharana ny loko malay
Ny loko malay dia be mpampiasa amin'ny haingon-trano sy ny haingon-trano ho an'ny besinimaro, toy ny villa sy trano, trano fisakafoanana sy hotely, toeram-pivarotana sy tranobe misy birao sns.
Matetika ny tetikasa haingo ho an'ny daholobe dia matetika ampiasaina mba hamoronana fahatsapana indostrialy misy loko mainty malay, ary ny vokatr'ilay rindrina misavoana dia afaka manatsara ny habakabaka amin'ny habakabaka.
Ho an'ny fampiasana an-trano dia afaka misafidy loko mitovy amin'ny loko malay amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina ianao, mifantoka amin'ny fahombiazan'ny rindrina iray, ampiasaina ho rindrina any ambadiky ny fiatraikany, tsy dia mihoapampana loatra ny vokany, fa afaka manasongadina kokoa ny fomba ihany koa.
Design Famolavolana Fangxingyuan
Dingana fananganana sy fitandremana
Voalohany, mihodina primer anti-alkali aorian'ny fahavitan'ny fitsaboana ifotony, ary ny famafazana mandra-pahadio sy milamina. Ny lanjan'ny PH an'ny fitaovana fitsaboana voalohany dia tokony ho latsaky ny 10.
Faharoa, fotsy ny loko malay. Azo afangaro amin'ny loko rehetra izy, mampiasa paty miloko mifantoka be amin'ny rano mba hampifangaro ny loko.
Fahatelo, fanesorana batch. Mampiasà vata famarana sy fitaovana hafa hanoritana ny toerana na hikikisana mihitsy aza. Isaky ny mila miandry ny maina ianao teo aloha. Fehezo ny elanelana misy eo amin'ny lamina, arakaraka ny hatsarany no tsara kokoa. Ny dingana voalohany dia ny fampiasana teknika mitovy amin'ny dingana faharoa.
Efatra, taorian'ny fahavitan'ny fanosorana. Azonao atao ny mampiasa antsy vy tsy manara-penitra mba hanamboarana ny zoro fanesorana fanosotra na 2000 harato sandpaper tsara indrindra na dia polishing aza, mandra-pahatongan'ny famiratra toa marbra. Amin'izay fotoana izay dia vita ny dingana fanamboarana.
Rehefa vita ny fanamboarana dia mila mitandrina ny fiarovana ny vokatra vita ianao. Aza soratana amin'ny zava-maranitra, sarotra ny manamboatra aorian'ny fikororohana.
Ny loko malay dia hihena kely rehefa elaela, ka mety ho maizina kely kokoa rehefa mifidy ny lokony.
Ny maripana fitehirizana ny loko malay sy ny maripana fanorenana dia eo anelanelan'ny 5 ℃ -35 ℃. Amin'ny ririnina dia tokony hifantoka amin'ny fiarovana ny fanala amin'ny loko malay ianao, mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiasana sy ny fanamboarana any aoriana!
Ny vidiny sy ny mariky ny loko malay
Ny vidin'ny loko malay: an-trano, ny vidiny dia 30-100 yuan isaky ny metatra toradroa. Teny nafarana, 200-500 yuan isaky ny metatra toradroa.
Marika eto an-toerana dia: Henan Caibei, loko Tiangong, Shanghai Hangchuang, Beijing Ban Gong
Ny marika nafarana dia: Willow, MP Italiana, Willowney, Furfini
Manaraka ity dia famintinana ny tabilao, inona ny loko malay?
Previous :: Inona no atao hoe PU Stone? Next: Inona no atao hoe Rock Panel?